सस्तो OBB ट्रेन टिकटहरू र यात्रा मूल्यहरू | एक ट्रेन बचत गर्नुहोस्
सस्तो OBB ट्रेन टिकटहरू र यात्रा मूल्यहरू
घर > सस्तो OBB ट्रेन टिकटहरू र यात्रा मूल्यहरू
यहाँ तपाईं बारे मा सबै जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ सस्तो OBB ट्रेन टिकट र OBB यात्रा मूल्यहरू र लाभहरू.
शीर्षकहरू: 1. ट्रेन हाइलाइटहरू द्वारा OBB
2. OBB को बारेमा 3. शीर्ष इनसाइट्स सस्तो OBB ट्रेन टिकट प्राप्त गर्न
4. OBB टिकट कति खर्च हुन्छ 5. यात्रा मार्गहरू: OBB ट्रेनहरू लिन किन यो राम्रो छ, र हवाइजहाजबाट यात्रा गर्नुहुन्न
6. मानक बीच के भिन्नताहरू छन्, कम्फर्ट, र OBB मा Sparschiene 7. त्यहाँ एक OBB सदस्यता छ
8. कति लामो OBB प्रस्थान पहिले आउन 9. OBB ट्रेन कार्यक्रम के हो?
10. कुन स्टेशनहरू OBB द्वारा सेवा प्रदान गर्दछ 11. OBB FAQ
ट्रेन हाइलाइटहरू द्वारा OBB
एक उच्च समयनिष्ठ दर को साथ 96%, OBB (कहिलेकाँही OEBB भनिन्छ) यूरोपमा सब भन्दा भरपर्दो रेल अपरेटरहरू मध्ये एक हो.
प्रत्येक बर्ष, OBB लिन्छ 447 मिलियन मानिस र 105 अस्ट्रिया र यूरोप भरि उनीहरूका गन्तव्यहरूमा लाखौं टन वस्तुहरू.
OBB धेरै वातावरण मैत्री छ, र 100% उनीहरूको सबै बिजुली नवीकरणीय उर्जाबाट प्राप्त हुन्छ.
OBB अस्ट्रियाको सबैभन्दा ठूलो गतिशीलता सेवा प्रदायक हो.
OBB को बारेमा
OBB, अस्ट्रियन संघीय रेलवे, अष्ट्रियन संघीय रेलवे को लागी अर्को नाम हो. यो स्थापित भएको हुनाले 1923, OBB ले बर्षेदेखि अस्ट्रेलियाका नागरिकहरूलाई गतिशीलता सेवाहरू प्रदान गरेको छ. युरोपमा हालसालै गरिएको एक अध्ययनले देखायो, समयनिष्ठामा OBB उत्तम हो, विश्वसनीयता, र आवृत्ति.
OBB प्रस्तावहरु अस्ट्रिया भित्र रेल सेवाहरू र यूरोप भर. सहि टिकटको साथ, तपाईं सबै राम्रो देख्न सक्नुहुन्छ युरोपमा छुट्टी ठाउँहरू. टिकट र कार्ड सदस्यता को विभिन्न वर्ग संग, OBB सबैको आवश्यकताहरू पूरा गर्दछ.
OBB लगातार भियना – ग्राज, सल्जबर्ग – भियना, लिन्ज – सेन्ट. परागकण, ग्राज - साल्जबर्ग. तपाईं OBB ट्रेनहरू प्रयोग गरेर यूरोप भित्र छिमेकी देशहरूमा जान सक्नुहुनेछ.
निगम भर, 41,904 रेलवे र बस नेटवर्कमा काम गरिरहेका कर्मचारीहरू (थप 2,000 प्रशिक्षुहरु) केहि निश्चित गर्नुहोस् 1.3 दस लाख यात्रीहरु सुरक्षित आफ्नो गन्तव्यहरु मा हरेक दिन पुग्न.
जाऊ त्यहाँ एउटा ट्रेन होमपेज बचत गर्नुहोस् वा खोजी गर्न यो विजेट प्रयोग गर्नुहोस् OBB का लागि टिकट टिकटहरू
शीर्ष इनसाइट्स सस्तो OBB ट्रेन टिकट प्राप्त गर्न
नम्बर 1: तपाईको OBB टिकट अग्रिममा बुक गर्नुहोस् जतिसक्दो चाँडो
को मूल्य OBB ट्रेन टिकट यात्राको दिन नजिकि बढ्दै जान्छ. तपाईं आफ्नो OBB ट्रेन टिकट प्रस्थान दिन देखि सकेसम्म टाढा बुकिंग गरेर पैसा बचत गर्न सक्नुहुनेछ. OBB ट्रेन टिकटहरू सकेसम्म चाँडो उपलब्ध छन्3को6महिना अगाडि रेल प्रस्थान. चाँडै बुकिंग सुनिश्चित गर्दछ कि तपाईं सस्तो OBB ट्रेन टिकट पाउनुहुन्छ. तिनीहरू पनि संख्या मा सीमित छन्, छिटो तपाईं बुक, तपाईको लागि सस्तो. OBB ट्रेन टिकटमा पैसा बचत गर्न, चाँडै तपाईको टिकट किन्नुहोस्.
नम्बर 2: OBB द्वारा यात्रा अफ-पिक-पीरियड अवधिमा
OBB ट्रेन टिकट हो अफ-पीक अवधिको समयमा सस्तो, हप्ताको सुरूमा, र दिन को समयमा. तपाईं पक्का हुन सक्नुहुन्छ सस्ता रेल टिकट हप्ता भित्र. मंगलबार, बुधवार, र बिहीबार, OBB ट्रेन टिकट सबैभन्दा किफायती छन्. बिहान र साँझ काम गर्ने यात्रुहरूको मात्राको कारण, ट्रेन टिकट बढी खर्च भयो. यो बिहान र साँझको कम्युटको बीच कुनै पनि समयमा यात्रा गर्न निकै सस्तो छ. हप्ताहरू रेलहरूका लागि अर्को शिखर अवधि हो, विशेष गरी शुक्रवार र शनिबार. OBB ट्रेन टिकट मूल्यहरु पनि बढ्छ सार्वजनिक बिदा र स्कूल बिदा.
नम्बर 3: OBB का लागि तपाइँको टिकटहरू अर्डर गर्नुहोस् जब तपाइँ तपाइँको यात्रा तालिकाको बारे निश्चित हुनुहुन्छ
OBB ट्रेनहरू उच्च माग मा छन्, र न्यूनतम प्रतिस्पर्धा संग, तिनीहरू हाल अष्ट्रियामा रेलहरूको लागि शीर्ष छनौट रहन्छन्. तिनीहरूले ट्रेन टिकट प्रतिबन्धहरू सेट गर्न सक्दछन् जुन उनीहरूसँग छ कि टिकट विनिमय वा फिर्तीलाई निषेध गर्दछ जबसम्म यो व्यवसायको प्रकारको टिकट छैन।. जहाँसम्म अझै वेबसाइटहरू छन् जहाँ तपाईं आफ्नो टिकट मानिसहरूलाई दोस्रो हात बेच्न सक्नुहुन्छ, OBB दोस्रो हात टिकट बिक्री को लागी अनुमति दिदैन. यसले कसरी तपाईंको पैसा बचत गर्दछ? तपाईको टिकट मात्र अर्डर गर्नुहोस् जब तपाई आफ्नो तालिकाको निश्चित हुनुहुन्छ तपाईले दुई पटक एक टिकट बुकिंग गर्नबाट बचाउँनुहुनेछ किनकि केहि आयो र तपाईले मूल टिकट प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न।.
नम्बर 4: तपाईंको ओबीबी टिकटहरू सेभ ए ट्रेनमा किन्नुहोस्
एउटा ट्रेन सेभ गर्नुहोस् सबैभन्दा ठूलो छ, सबै भन्दा राम्रो, र युरोपमा ट्रेन टिकटको लागि सस्तो सौदा. धेरै रेल अपरेटरहरु संग हाम्रो कनेक्शन, ट्रेन टिकट स्रोतहरू, र हाम्रो टेक्नोलोजी एल्गोरिदमको ज्ञानले हामीलाई सस्तो ट्रेन टिकट सौदाहरूमा पहुँच दिन्छ. हामी केवल OBB को लागी सस्तो ट्रेन टिकट डील प्रस्ताव गर्दैनौं; हामी OBB का अन्य विकल्पहरूको लागि समान प्रदान गर्दछौं.
OBB टिकट कति खर्च हुन्छ?
OBB टिकट एक एकल रेल यात्राको लागि € १55 देखि €१ सम्म सम्म उच्च सम्म शुरु हुन्छ. द OBB ट्रेन टिकटको मूल्य कुन प्रकारको टिकट किन्नुहुन्छ र कहिले तपाईले यात्रा गर्न छनौट गर्नुहुन्छ त्यसमा निर्भर हुन्छ:
एक तर्फि टिकट राउन्ड ट्रिप
मानक € १50० – €। 40 २40० – १०० डलर
प्रथम श्रेणी € १50० – €। 40 २40० – १०० डलर
यात्रा मार्गहरू: OBB ट्रेनहरू लिन किन यो राम्रो छ, र हवाइजहाजबाट यात्रा गर्नुहुन्न
1) तपाईं शहर केन्द्रमा आइपुग्नुहुन्छ. यो OBB रेलहरूको एक फाइदा हो जब हवाईजहाजको तुलनामा. OBB ट्रेनहरू र अन्य सबै ट्रेनहरू शहरको कुनै पनि ठाउँबाट अर्को शहरको बीचमा यात्रा गर्छन्. यो तपाइँको समय र एयरपोर्टबाट शहरको केन्द्रको लागि ट्याबको लागत बचत गर्दछ. ट्रेन बिसौनी संग, यो सहरको कुनै पनि ठाउँमा पुग्न सजिलो छ जुन तपाईं जानु भएको थियो. तपाईं कहाँबाट यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भन्नेले खास फरक पार्दैन, म्युनिख, सल्जबर्ग, लिन्ज, वा कोलोन, शहर सेन्टर स्टप OBB रेल का एक प्रमुख लाभ हो!
2) हवाइजहाज बाट यात्रा को लागी तपाईको एयरपोर्टमा कम्तिमा तपाईको उडान समय भन्दा धेरै घण्टा सम्म हुनु पर्छ. विमानमा चढ्नु अघि तपाईंले सुरक्षा जाँचहरू पार गर्नुपर्नेछ. OBB ट्रेनहरूको साथ, तपाई बस स्टेशन मा हुनु पर्छ एक घण्टा भन्दा अलि अगाडि. जब तपाइँ यो समयलाई पनि विचार गर्नुहुन्छ जब तपाईंलाई एयरपोर्टबाट शहरको बीचमा यात्रा गर्नको लागि लिन्छ, तपाईंले महसुस गर्नुहुनेछ कि OBB रेलहरू सम्पूर्ण यात्रा समयको सर्तमा राम्रो हुन्छन्.
3) सतह मा, OBB ट्रेन टिकटको मूल्य बजेट एयर टिकट भन्दा बढी महँगो देखिन्छ. यद्यपि, जब तपाईं समावेश सबै शुल्क तुलना गर्नुहुन्छ, OBB ट्रेन टिकट एक राम्रो मूल्य सम्झौता छ. सामान शुल्क जस्तै अन्य लागतहरूको साथ जुन तपाईंले रेलहरूमा भुक्तान गर्नु पर्दैन, OBB द्वारा यात्रा गर्दै सबै भन्दा राम्रो छ.
4) ट्रेनहरू वातावरण मैत्री छन्. रेल र हवाइजहाज बीचको तुलनामा, रेलहरू माथि आउँथे. हवाइजहाजले ठूलो मात्रामा वातावरणलाई प्रदूषित गर्छन् उनीहरूको उच्च स्तरको कार्बनबाट. तुलनामा ट्रेनहरू बाहिर दिन्छन् कार्बन २०X कम हवाइजहाज भन्दा.
मानक बीच के भिन्नताहरू छन्, कम्फर्ट, र OBB मा Sparschiene?
OBB सँग विभिन्न बजेट र यात्रुहरूको प्रकारका लागि टिकटको विभिन्न वर्गहरू छन्: यो व्यापार हो वा फुर्सत. तपाईं निश्चित हुन सक्नुहुन्छ कि यी मध्ये एउटा टिकट तपाईंलाई उपयुक्त छ.
मानक OBB टिकटहरू:
मानक टिकट सबैभन्दा लचिलो ट्रेन टिकट हो जुन OBB ले प्रस्ताव गर्दछ. यदि तपाईंले छोटो सूचनामा यात्रा गर्नु छ भने, तपाईंले यो टिकट पाउनु पर्छ. तपाईं विशेष ट्रेनमा सीमित हुनुहुन्न, र तपाइँ तपाइँको जडान छनौट गर्न को लागी अनुमति छ. OBB मानक टिकट को लागी मान्य छ2दिन चाहे मार्ग र खरीद च्यानलको. मानक टिकटहरू यसको वैधताको पहिलो दिन अघि एक दिन नि: शुल्क प्रतिपूर्ति गर्न सकिन्छ. यो टिकट अनलाइन खरीद गर्दा, त्यहाँ प्रतिपूर्ति र मान्यताको लागि विशेष निर्देशनहरू छन्.
OBB कम्फर्ट टिकटहरू:
OBB K تکिल टिकटहरू नियमित OBB टिकट हुन्, र ती लागि प्रस्ताव छन् रात रेलको माध्यम बाट जडानहरू. ओबीबी कफरेस टिकटले यात्राको लागत समेट्छ, चयन गरिएको यात्राको कोटीमा आरक्षण, र स्लीपर केबिनमा खाजा.
मानक टिकट जस्तो छैन, कफर्सी टिकट कुनै पनि लचिलो छैन. यो विशेष मार्ग र विशेष ट्रेनको लागि बुक गरिएको छ. तपाईंले कुनै पनि जडानहरूको लागि नयाँ टिकट लिनु पर्छ यो टिकट कभर मार्गको अघि र पछाडि.
प्रतिपूर्तिहरूको लागि, OBB का असहज टिकटहरू नि: शुल्क फिर्ता फिर्ता हुन्छन् 15 वैधताको पहिलो दिन दिनहरू. त्यस पछि 15 दिन चिन्ह, असहज टिकटहरू फिर्ता गरियो 50% मूल मूल्य को.
OBB Sparschiene टिकटहरू:
Asides बाट मानक टिकट र कफरेस टिकट, OBB Sparschiene टिकट को रूपमा परिचित टिकट को एक अर्को दायरा प्रदान गर्दछ. यो दायरा सस्तो र कम बजेट यात्रुहरूको लागि हो. त्यहाँ दुई प्रकारका स्पार्सचेन टिकटहरू छन्.
त्यहाँ एक OBB सदस्यता छ?
स्थानीय नागरिकका लागि, सदस्यताका दुई प्रकार छन्, भोर्टिलकार्ड र ओस्टेरिचकार्ड. अन्तर्राष्ट्रियहरूका लागि हामी लामो समय अग्रिममा किन्न सल्लाह दिन्छौं र त्यसपछि तपाईंलाई सस्तो विकल्पको साथ प्रस्तुत गरिनेछ.
Vorteilscard Classic मा किन्न सकिन्छ: (स्थानीय नागरिकले 45% यात्रुहरूको लागि मानक एकल टिकट छुट छ कि बाट उनीहरूको टिकट खरीद गर्नुहोस्)
– OBB टिकट काउन्टर.
– OBB ग्राहक सेवामा 05-1717
– OBB रेल र बसहरूमा स्टाफबाट.
एक Osterreichcard क्लासिक संग, तपाईं एक अतिरिक्त स्वयं बुकिंग छूट प्राप्त गर्नुहुनेछ 5% बाट टिकट खरीद गर्दा यात्रुहरूको लागि मानक एकल टिकटमा:
– रेल स्टेशनमा एक OBB टिकट भेन्डि machine मेशिन.
वृद्ध यात्रीहरू 15 र माथी Vorteilscard परिवार खरीद गर्न सक्नुहुन्छ. यो कार्ड एक फोटो परिचय पत्रको साथ संयोजनमा मान्य छ, जसमा होल्डरको उमेर समावेश हुनुपर्छ. यस टिकटको साथ, तपाईं सबै OBB रेलहरूमा यात्रा गर्न सक्नुहुनेछ.
Vorteilscard परिवार को सबै धारकहरु Vorteilscard क्लासिक को लाभ ले आनंद. क्लासिक भत्ताका साथै, Vorteilscard परिवार कार्ड को दुई धारकहरु पनि छुट छ कि यदि तिनीहरू एक शिशु वा एक बच्चा संग यात्रा.4भोर्टेकार्ड परिवारका प्रत्येक धारक बच्चाहरुले छुट पाउनेछन् 100% मानक एकल टिकटमा.
अस्ट्रिया युवा कार्ड
तिनीहरूको 26 औं जन्मदिन अघि दिन सम्म, यात्रीहरूले एक Osterreichcard जुगान्ड किन्न सक्छन्. तपाईको उमेर को प्रमाण को साथ एक तस्वीर आईडी को साथ तपाईको उमेर प्रमाणित गर्न सक्नुहुन्छ.
शिशु र बच्चाहरूको आमाबुवा जसले अस्ट्रिया वा अरू कतै पारिवारिक भत्ता प्राप्त गर्छन् तिनीहरूले ओस्टरेरिचकार्ड फेमली किन्न सक्छन्. लाभहरू Osterreichcard क्लासिक को जस्तै हो.
यात्रीहरूले एक Osterreichcard क्लासिक खरीद गर्न सक्छन्. एक Osterreichcard क्लासिक संग, तिनीहरूले एक छुट छ 100% पहिलो र दोस्रो कक्षाको लागि सीट आरक्षणको लागतमा. एक Osterreichcard क्लासिक2कक्षा को साथ, तपाईं एक प्राप्त 50% मानक प्रकार एकल टिकटको साथ कक्षा २ देखि १ कक्षामा परिवर्तनमा छुट.
अस्ट्रियाका जेष्ठ नागरिक यात्रुहरू 63 र अधिक एक Osterreichcard वरिष्ठ खरीद गर्न सक्नुहुन्छ. लाभहरू Osterreichcard क्लासिक को जस्तै हो.
अस्ट्रिया कार्ड विशेष
असक्षम व्यक्तिहरू जससँग अस्ट्रियन प्रमाणपत्रको अशक्तताको वा गम्भीर युद्ध-सम्बन्धी असक्षमताको निम्न प्रविष्टिहरू छन्, तिनीहरूले Osterreichcard Spezial खरीद गर्न सक्दछन्।. लाभहरू Osterreichcard क्लासिक को जस्तै हो.
लिन्जदेखि सेन्ट पोल्टन टिकटहरू
भियना देखि साल्जबर्ग टिकटहरू
सेन्ट पोलटेन टु वियनर न्यूस्टैड टिकटहरू
साल्जबर्गबाट ​​ग्राज टिकटहरू
कति लामो OBB प्रस्थान पहिले आउन?
दोस्रोलाई सहि भन्न गाह्रो छ, तर एउटा ट्रेन बचाउनुहोस् सल्लाह दिन्छ कि तपाईं आफ्नो प्रस्थान समय भन्दा एक घण्टा पहिले तपाईं पुग्नुहुन्छ. यदि तपाईं पासपोर्ट नियन्त्रणमा सक्दो चाँडो समाप्त गर्नुभयो भने, तपाईं आफ्नो ट्रेन यात्रा सकेसम्म आरामदायी बनाउन आवश्यक चीजहरूको लागि किनमेल गर्न सक्नुहुन्छ.
OBB ट्रेन कार्यक्रम के हो??
कुन स्टेशनहरू OBB द्वारा सेवा प्रदान गर्दछ?
OBB को भियना स्टेशन Vienna Hauptbahnhof हो (भियना केन्द्रीय स्टेशन), जुन भियनाको मुटुमा Sudtiroler Platz नजिकै अवस्थित छ.
लिन्जमा, आजकल OBB ट्रेनहरू लिन्ज सेन्ट्रल स्टेशन बाट छुट्नुहोस् र आइपुग्नुहोस् (जर्मन मा केन्द्रीय स्टेशन Hauptbahnhof बराबर), डान्यूब नदी भन्दा टाढा छैन.
साल्जबर्ग मुख्य रेलवे स्टेशन (साल्जबर्ग केन्द्रीय स्टेशन) अष्ट्रिया मा दोस्रो सबैभन्दा ठूलो शहर को बीच मा स्थित छ – सल्जबर्ग.
बाइक बोर्डमा अनुमति छ OBB ट्रेनहरू?
OBB रेलहरूमा बाइकहरूलाई अनुमति छ जबसम्म तपाईं स्टेशनमा उनीहरूको लागि टिकट खरीद गर्नुहुन्छ. तिनीहरू प्रति बाइक € २ लागत.
बच्चाहरू OBB ट्रेनहरूमा निःशुल्क यात्रा गर्छन्?
हो, तर केवल एक निश्चित उमेर सम्म. छ वर्ष भन्दा कम उमेरका बच्चाहरू निःशुल्क यात्रा गर्छन्.
OBB ट्रेनहरूमा घरपालुवा जनावरहरूलाई अनुमति छ?
हो, तिनीहरू पाल्तु जनावरहरूका लागि दिशानिर्देशहरू पालना गर्छन्. साना घरपालुवा जनावरहरुलाई क्रेट वा यस्तै अवस्थामा राख्नु पर्छ.
OBB का लागि बोर्डिंग प्रक्रियाहरू के हुन्??
केही स्टेशनहरूमा इलेक्ट्रोनिक डिस्प्लेहरू छन् जुन रेलहरूको गठन प्रकट गर्दछ. थप, रेलहरू कोच नम्बर एक ट्रेन आउँदा हुन्छ जहाँ क्षेत्र जाँच गर्न यी प्रयोग गर्नुहोस्.
सर्वाधिक अनुरोध गरिएको OBB FAQ – के मैले OBB मा अग्रिम सिट अर्डर गर्नु पर्छ??
तपाईं सक्छ बोठिक छaमलाई थाहा छमा अग्रिम घरेलु मा OBB को लागी ट्रेनहरु3यूरो. तपाईं हुनेछ व्यक्तिगत प्राप्त गर्नुहोस् सीट आरक्षण गरे पछि.
त्यहाँ ओबीबी भित्र वाइफाइ इन्टरनेट छ??
हो. तपाईं रमाउन सक्नुहुन्छ सबै OBB ट्रेनहरूमा नि: शुल्क वाइफाइ इन्टर्नेट र सबै यात्रा वर्ग जब तपाईं OBB टिकट खरीद गर्नुहुन्छ (प्राथमिकता SaveATrain.com मा).
यदि तपाईंले यो पोइन्ट पढ्नु भएको छ भने, तपाईंलाई थाहा छ तपाईंलाई तपाईंको OBB ट्रेनहरूको बारेमा जान्न आवश्यक पर्दछ र तपाईंको OBB ट्रेन टिकट खरीद गर्न तयार हुनुहुन्छ एक ट्रेन बचत गर्नुहोस्
के तपाइँ यस पृष्ठलाई तपाइँको साइटमा इम्बेड गर्न चाहानुहुन्छ?? यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftrain-obb%2F%0A%3Flang%3Dne - (को एम्बेड कोड हेर्न तल स्क्रोल), वा तपाइँ केवल यस पृष्ठमा सीधा लिंक गर्न सक्नुहुन्छ.